Irreechaa bara kanaa ilaalchise 2017 | Kichuu
1. Bakka bu’an Mootumma akka achitti hin arganne ibsamee jira. Kana nuuf kabajama
2. Uffanna ilaalchise namni waan qabu ykn fedhe ufate Irreechaa dhaquu danda’a. Garuu Irreechaa kan dhaqnu gaddaafi miti. Kanaaf wayya gurracha ufachuun sirri miti. Dabalataan Oromoon wayya gurracha akka gadaatti hin ilaalu. Namni yoo jalaa du’e kirrii adii mormatti hidhata. Kanaaf wayyaa qalloo ykn kirrii adii addatti hidhadha kan jedhame. Kana waldaa Waaqefannati adunyatti murtese. Garuu kun darqiin ta’u hin qabu. Kan barbaade kirri adii addatti kirri diina harkatti yaa hidhatu.
3. Bakka bulti yoo dhabdan waajira gadaa deema. Garuu imaana isinitti kenanna mormii hin gaggeesina. Yoo dungoo ibsuu barbaadan abboti gada wajjin mari’adha. Isaan yoo isiniif eyyaman qofa gaggeesitu.
4. Qarshii hamma qabda warra Abdi wayaneen buqa’e gumaachu hin dagatina. Gadaan gamoo fuldura Wajira gada jiru bituu waan barbaaduf waan qabdan gumaachaf.
5. Karaan bakka kanatti gargara bahe jira.suura isa yoon argadhe post godha. Kanaaf bitaa keessan qabatanii malka buutu. Mirgaan immo deebitu. Akka wali hin dhiibne bitaan karaa dhaqaniin qofa mirgi karaa deebi’anin. Biraan bahii mirgaan naa galii yaa goticha koo jedhu miti.
Dhumarra Irreechi bara kana nagaan xumuramun Oromoof injifanno guddadha. Kanaaf hundi keenya itti yaa yaadnu.
Via Teferi Nigussie Tafa
Irreechi Aanaa Meettaa Roobii/Walqixxee/ Malkaa Qaajoo gaggeessummaa Abbootii Gadaa fi Qeerroon milkiin Xumurameera!!Baga milkooftan jenneerra
Fulbaana 28,2017) Basaasotni wayyaanee osoo ayyaanni Irreechaa hin ga’in dursanii Bishooftuu akka seenaniif wayyaaneen qopheessaa akka jirtu barame.
Basaasotni diinaa kunniin Qeerroo Oromoo wayyaaneen kanaan dura qabdee hidhuuf barbaaddee dhabde suuraa isaanii qabatanii bakka ayyaana kanaa akka dhaqanii fi dargaggoota kana akka hordofan qajeelfamni darbuufiin ibsameera.
Gama biraan kabaja Guyyaa Ayyaana Irreechaa jeequuf wayyaanee fi tikni isaa, lukkeelee fi farreen shira xaxuu irraa waan hin deebineef dammaqinnii fi to’atnaan akka jabaatu jechuun sabboontotni Oromoo ummata Oromoo ayyaana kana irratti argamuuf dhaamsa isaanii dabarsu.
This entry was posted in News, Photo Gallery by kichuu_admin. Bookmark the permalink.